पर्यटनमन्त्री अधिकारीको भिसा बेलायती दूतावास भित्रै च्यातियो ! - Everest Dainik - News from Nepal
पर्यटनमन्त्री अधिकारीको भिसा बेलायती दूतावास भित्रै च्यातियो !
लण्डन, कार्तिक १७ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको बेलायतको भिसा च्यातिएको अवस्थामा भेटिएको छ। नोभेम्वर ५ देखि ७ तारिखसम्म लण्डनमा आयोजना हुने विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको तर्फवाट सहभागि हुन वेलायत आउन लागेका अधिकारीको भिसामा वेलायती दूतावासको लापर्वाही गरेको कारणले भिसा रद्द भएको हो।
भिसा रद्द भएको अवस्थामा भेटे पछि यस बिषयमा यथार्थ बुझ्न मन्त्रालयका कर्मचारीले ललितपुर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले काठमाडौं स्थित भिसा वितरक सस्था भीएचएफ गोलोवलको अफिस पुगेर मुचुल्का उतारेको थियो। शुरुमा मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्न नमानेका भीएचएफका कर्मचारीलाई प्रहरीले कानुनी दयारामा ल्याउने चेतावनी दिएपछि गल्ति स्वीकार गर्दै हस्ताक्षर गरि आइतवार सम्म पुनः अर्को भिसा इसु गर्ने बचन दिएका थिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारी बाहेक अन्य कर्मचारीले बिहिवार नै भिसा हात पारेका थिए। मन्त्रीको भिसा नआए पछि मन्त्रालयका कर्मचारी बिहानैदेखि भीएचएफको कार्यालयमा भिसा कुरेर बसेका थिए। नोभेम्वर १ मा जारि गरिएको अधिकारीको भिसा किन रातोमसीले क्रस गरिएको हो भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन।
मन्त्री अधिकारीको सचिवालयले भिसा च्यातीएको र रातो मसीले क्रस गरेको पाइएको बताएको छ। नेपाली दूतावास लण्डनका प्रवक्ता शरदराज आरणले मन्त्री अधिकारीको भ्रमण अझै स्थगित नभएको र सोमवारसम्ममा उनको उपस्थिती हुन सक्ने बताए। नागरिक दैनिकबाट साभार